Aluminum CNC machining, nkenke machining - Anebon
CNC igwe Service
CNC Gbanwere Service
Die Nkedo Service
Mpempe akwụkwọ Metal Ụgha
CNC igwe Parts
CNC agbanye Parts
Anyị na-aghọta mkpa nke ihe ịma aka ndị na mbụ na nọgidere ịkwa ókè nke ihe bụ omume. Anyị na-arụ ọrụ ka tolerances ka uko ka ± 0.01 kwa 100mm nke akụkụ ọ bụ ezie na tighter tolerances kwere omume na ezi anụ, mesikwuru ọkwa nke engineering ihe. Nkenke CNC machined akụkụ nwere ike wuru ahịa omenala gosiri ihe.
Die Ife Parts
Nkenke agbanye Components
CNC agbanye Part
CNC agbanye Peek Parts
Die Nkedo Mechanical Parts
Die mgbatị Phone Parts
Best Metal zọ Parts
Fast zọ Parts
Metal zọ Part
Anebon e hiwere na 2010. Anyị otu na-ọkachamara na imewe, mmepụta na ahịa nke ngwaike ụlọ ọrụ. Na Anyị gafere ISO 9001: 2015 asambodo.
Anyị nwere elu, oru oma na ụkpụrụ dị elu igwe si Japan, gụnyere dị iche iche CNC egwe ọka ma na-atụgharị igwe, elu grinder, esịtidem na larịị grinder, Wedmls, Wedmhs ect. Ma anyị na-nwere ihe ndị kasị elu ule akụrụngwa. Parts na tolerances ruo ± 0.002mm nwere ike na-akwado.
Our History Industries Customer Reviews anyị Advantage
PERCISION, arụmọrụ, na ntụkwasị obi
Gaa na anyị ahịa na Germany
Ahịa si Europe gara Anebon
Ekwentị: + 86-13509836707
na-anwụ mgbatị akụkụ , aluminum mgbatị, aluminum anwụ mgbatị akụkụ , aluminum anwụ mgbatị , nēfe akụkụ , aluminum anwụ nkedo,